ဝါးခယ်မ : September 2015
တည်ဆောက်မည်. အဆောက်အဦး ပုံစံ
ယခု ဤအဆောက်အဦးတည်ဆောက်သော မြူရုံးလမ်း စာရေးကုန်းရပ်ကွက် နေရာမှာ ယခင်က ၀ါးခယ်မ မြို.၏ ကြက်တောင်ရုံအဆောက်အဦးဖြစ်သည် ။ သို.သော်နောက်ပိုင်းတွင် ပြိုကျ ပျက်စီးလျှက်ရှိပြီး မည်သူမျှ ပြုပြင်ခြင်းမရှိခဲ့သော နေရာဖြစ်သည် ။ ထို နေရာသည် အား/ကာ ပိုင်မြေနေရာ ဖြစ်သည်ဟု သိရပြီး စားပွဲတင် တင်းနစ်ကစားသမား များ မှ ထိုနေရာတွင် စားပွဲတင် တင်းနစ်အားကစားရုံ တည်ဆောက်လိုကြောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၈ ပေ ၅၄ ပေ မြေနေရာအတွင်း ခွင်.ပြုချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
ထိုသို.ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွင်.ပြုချက် ရရှိခဲ့သော်လည်း စတင်တည်ဆောက်ရေး အတွက်တွင် မူ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ တစ်ရပ် စတင်ကြုံတွေ.ခဲ့ရသဖြင်. အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု ရပ်တန်.နေခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည် ။ ထို.နောက် ကိုကျော်နိုင်ဦး ( ၁၉၉၁-၉၁ အထက ၁ ) နှင်. ဆက်သွယ်ခဲ့မိပြီးနောက် အပေါ်ထည်အတွက် Steel Structure ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည်များ နှင်. Design ပိုင်းဆိုင်ရာ တို.ကို မတည်တာဝန်ယူပေးမည်ဟု တာဝန်ခံခဲ့ရာမှ အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။ထို.အပြင် အဆောက်အဦးရှေ.ပိုင်းဆိုင်ရာ အလှဆင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် ကိုမျိုးမင်းစိုး မှ တာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး ကိုအောင်ကျော်ဦး ၊ ကိုဝင်းတင်.၊ ကိုထွန်းရီ ၊ ကိုစိုးအောင် ၊ ကိုဆင်ပေါက် ၊ ကိုဇော်လေး ၊ မေတ္တာမွန် စသည်တို.အပြင် ( ထိုစာရင်းကို ဖွင်.ပွဲမတိုင်မှီ ထိုအားကစားခန်းတွင် ရေးသားဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ၊ အသေးစိပ်ကို ဖွင်.ပွဲ အချိန်တွင် တောင်းယူရေးသားဖော်ပြပေးပါမည် ) အခြားစိတ်ဝင်စားသူများလည်း ပါဝင်လှုဒါန်းခဲ့ကြပါသည် ။အဆောက်အဦးကို လွန်ခဲ့သော ၂လခန်.က စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
လက်ရှိအချိန်တွင် ညနေ ၄နာရီ ၀န်းကျင် မှ ည ၁၀ နာရီခန်.အထိ လာရောက်ကစားနေသူများ ရှိနေပြီး တရားဝင် အသင်းဝင်အဖြစ်ကိုမူ ဖွင်.ပွဲအပြီးတွင် စတင်လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်ကြေးအဖြစ် ၂၀၀၀ သတ်မှတ်ထားကာ လစဉ်ကြေး ၃၀၀၀ ကျပ် ကျသင်.မည်ဖြစ်သည် ။ အသင်းဝင်ကြေးကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ.တွင် စတင်လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။ လက်ရှိတွင်ကစားရန် ခုံ ၃ ခုံရှိနေပြီး ၀င်ကြေးရရှိသော ငွေဖြင်. ခုံတစ်လုံးထပ်မံဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကာ ခုံတစ်လုံးကို အထက ၁ တွင်ကျောင်းသားများ ကစားနိုင်ရန် ပို.ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။ ထို.အပြင် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင်လည်း ကျောင်းသားငယ်များအတွက် သင်တန်းများဖွင်.လှစ်သွားရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည် ။ ယခင်ကမူ မင်းပိုင်းကျောင်း တွင် သွားရောက်ကစားကြရပြီး ယခုအခါတွင်မူ မိမိတို.ကိုယ်ပိုင်အားကစားရုံအဖြစ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကစားခွင်.ရပြီဖြစ်သည် ။ အားကစားရုံကို Delta Star ( or ) Ayeyar Star ဟု မှည်.ခေါ်ဖွယ် ရှိကြောင်းလည်း သိရသည် ။
ထိုစားပွဲတင် တင်းနစ်အားကစားရုံကို သီတင်းကျွတ်လပြည်.နေ. တွင် ဖွင်.လှစ်ဖွယ်ရှိနေပြီး ရန်ပုံငွေအတွက် ရောင်းချထားသော ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်များကိုလည်း ထိုညတွင်ပင် ဖွင်.လှစ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ကံစမ်းမဲ လက်မှတ် သိန်း၃၀ ဖိုးခန်. ( စာရင်းတိုးလာနိုင်ပါသည် ) ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်မျှရောင်းရသည်ဖြစ်စေ ရောင်းရငွေ၏ ၅၀% အား ကံစမ်းမဲ ပြန်လည်ဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်၅၀%အား တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ အပြီးသတ် လုပ်ငန်းများ အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးမည်. ပစ္စည်းများ မှာ လိုင်စင်ပါ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ၁ စီး ၊ LCD 24” TV ၂လုံး ၊ Handset ၃ လုံး ၊ စက်ဘီး ၂ စီး ၊ PSI စလောင်း ၃ ခုနှင်. အခြားမဲ များ ပါဝင်မည်ဟု သိရပါသည် ။
တကယ်က ဖြစ်ချင်စိတ် နှင်. ကြိုးစားမှုက မိမိတို.လိုချင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း ဤ အဆောက်အဦးက သက်သေပင်ဖြစ်သည် ။ယခုဆိုလျှင် မိမိတို.မြို.လေးတွင် အလေးမရုံ သီးသန်.ရှိသည် ။ ခြင်းခတ်ကစားရုံ ရှိသည် ။ မြေပြင် တင်းနစ် ကစားကွင်း သီးသန်.ရှိသည် ။ ဘောလုံးကွင်း ရှိသည် ။ သေချာသည်က မြို.နယ်အဆင်. မြို.တစ်မြို.၏ အားကစားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦးများ ပိုင်ဆိုင်မှုက အထက်တန်းအဆင်.တွင်ရှိနေပြီ ။ အားကစားကိုမြတ်နိုးစိတ် ၊ ဇွဲရှိစွာ လေ.လာကြိုးစားချင်စိတ်အပြည်. သင်ကြားလိုစိတ် ၊ သန်.ရှင်းစွာ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ် များကို သိသိသာသာတိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားရင်း တစ်ချိန်တွင် ၀ါးခယ်မဖွား နိုင်ငံတော်အဆင်. ကစားသမားများ ပေါ်ပေါက်လာပါစေဟု ဆန္ဒပြုလျှက် ……………….
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 7:44 PM No comments:
ပုသိမ် - ၀ါးခယ်မ ကားလမ်း
ပုသိမ် - ကံကုန်း - မြင်းကဆိပ် - မြောင်းမြ လမ်းခွဲ အ၀င်
( သွားနေကျသူတွေအဖို. သိပြီးသားဖြစ်ပေမယ်. မရောက်တာကြာတဲ့သူတွေ - ပုသိမ်ကအပြန် ၀င်လည်ချင်သူတွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ် )
အရင်ကတော. ပုသိမ် - ၀ါးခယ်မ ခရီးစဉ်ဆိုတာ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ရဲ. ညနေ ၅နာရီကောင် ( ရန်ကုန်ကနေ ညနေ၅ နာရီထွက်လို. ) လို.ခေါ်တဲ့ ပုသိမ်အမြန် လောက်သာ အားထားရတဲ့ခရီးပါ ။ နောက်ပိုင်း ကားလမ်းတွေပေါ်လာ ၊ IWT သင်္ဘောတွေလည်း ပုဂ္ဂလိက လက်ရောက် ဆိုတော. ကားလမ်းကို ပိုအားထားလာကြပါပြီ ။
အဲ့ဒီထဲကမှ အရင်ကတော. ပုသိမ် ကနေ ၀ါးခယ်မ ပြန်ချင်ရင် ပုသိမ် - ရန်ကုန် ကားကို ၀ါးခယ်မ လမ်းခွဲအထိ စီး ၊ အဲ့ဒီကမှ ရန်ကုန် - ၀ါးခယ်မ ကားကို စောင်.စီး ၊ ပစ္စည်းတွေပါလာရင် အဆင်မပြေဖြစ်နဲ.ပေါ. ။ ပုသိမ်ကျောင်းသွားတက်တဲ့သူတွေ က အရင်ဆို သင်္ဘော ( အဝေးသင်ချိန်ဆို အသားကုန်ကြပ် ) ၊ နောက်တော. ကား၂စီးကို လမ်းတစ်ဝက်စီ ဖြတ်စီး ၊ ခုနောက်ပိုင်း တံတားတွေပြီးလာချိန်မှာတော.ပုသိမ်ကို အတိုဆုံးလမ်းကနေ တိုက်ရိုက်သွားလို.ရပါပြီ ။
ပုသိမ်ကအပြန် ၀ါးခယ်မကို ခဏတစ်ဖြုတ် ၀င်လည်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားပါတယ် ။ ပုသိမ်ကနေ ပုသိမ် - ရန်ကုန်လမ်းအတိုင်း ထွက်လာပြီး အပင်နှစ်ဆယ် ( ပုသိမ် TU ) ကျော်လာတာနဲ. ကိုးဆူ TollGate ၊ တကုန်းကြီး အထက်တန်းကျောင်း တို.ကိုရောက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီကျောင်းပြီးတာနဲ. ခဏအတွင်းမှာပဲ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ပုသိမ် - ကံကုန်း - မြင်းကဆိပ် - မြောင်းမြ လမ်းခွဲ ဆိုတာကိုရောက်ပါမယ် ။ ပုသိမ်ကနေ ၉မိုင်ခန်. အကွာအဝေးမှာပါ ။ အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်း ၀င်လာ ရုံပါပဲ ။
မောင်းလာရင်း လမ်းခွဲတစ်ခုတွေ.ပါမယ် ။ အဲ့ဒီလမ်းခွဲ ရောက်ရင်တော. ဘယ်ဘက် လမ်းခွဲ အတိုင်း မောင်းလာရုံပါပဲ ။ ပြီးတာနဲ. မြင်းကဆိပ် တံတား ကိုရောက်ပါမယ် ။ အဲ့ဒီ တံတားဟာ ကန်ကြီးဒေါင်. မြို.နယ်ရဲ. အဆုံးပါပဲ ။ မြင်းကဆိပ် တံတားပြီးတာနဲ. မောင်းလာရင် ၅မိုင် လမ်းဆုံကိုရောက်ပါမယ် ။ ၅မိုင်လမ်းဆုံဆို တာ ဒီလမ်းဆုံကနေ မြောင်းမြကို ၅မိုင်ပဲ လိုတော.တာကြောင်.ပါ ။အိမ်မဲကိုတော. ဒီနေရာကနေ ၂၂မိုင် ၆ဖာလုံ ဝေးပါတယ် ။ ဒီနေရာရောက်ရင်တော. အိမ်မဲလမ်းဘက်ကို ချိုးရပါမယ် ။ ဒီလိုနဲ.မောင်းလာရင် တံတားတစ်စင်း ထပ်ဖြတ်ရပါမယ် ။ အဲ့ဒီတံတားဟာ ဒီဘက်ခြမ်းက မြောင်းမြ မြို.နယ် နယ်နမိတ် အဆုံးဖြစ်ပြီး ဟိုဘက်ခြမ်းက အိမ်မဲ မြို.နယ် အစပ် ပါ ။ ပြီင်္းရင်တော. ရွာသစ်လမ်းဆုံကိုရောက်ပါမယ် ။ အိမ်မဲ အပိုင်ရွာသစ် ကနေ အိမ်မဲကို ၁၆မိုင် ၂ဖာလုံ ၊ ၀ါးခယ်မ ကို ၁၆မိုင် ၅ဖာလုံ ဝေးတယ်လို.သိရပါတယ် ။ လိုင်းကားတွေကတော. အဲ့ဒီရွာသစ် မှာ လူဝင်တင်လေ. ရှိတယ်လို.သိရပါတယ် ။
ပြီးလို.ဆက်မောင်းလာရင်တော. ကျွန်းကုန်းတံတား ၊ ပြီးတော. ကျွန်းကုန်းကို ကျောဘက်ကနေ ဖြတ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်းကုန်းက ထွက်ပြီးရင် သတိထားရမှာက ရေလိန်ကျေးရွာ အုပ်စုရောက်ရင်တော. ကွေ.က အတော်လေးကြီးတာမို. သတိထားရပါလိမ်.မယ် ။ ပြီးရင်တော. မရမ်းချောင် တံတား ကနေပြီးတော. ရွှေလောင်း - ၀ါးခယ်မ ကားလမ်းပေါ် ရောက်ပါလိမ်.မယ် ။ ဒါဆိုရင်တော. သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ၀ါးခယ်မ ကိုရောက်တော.မှာပါ ။
လိုင်းကား အနေနဲ.ကတော. ပုသိမ် အဝေးပြေး ၀င်းကနေ ၀ါးခယ်မ ကို မနက် ၁၁နာရီ နေ.လည် ၂နာရီ မှာ စိုးသိပ္ပံ ကား ရှိတယ်လို.သိရပြီး ၀ါးခယ်မ ကနေတော. မနက် ၆ နာရီ နဲ. ၇ နာရီ ထွက်တယ်လို. သိရပြီး ကားခ က ၂၅၀၀ပါ ။ ကိုယ်.ကားနဲ. ကိုယ် ဆိုရင်တော. ၁း၃၀ ခန်.ကြာပြီး လိုင်းကားနဲ.ဆိုရင်တော. ၂း၀၀ - ၂း၃၀ ကြားလောက်မောင်းတယ်လို.သိရပါတယ် ။ Google ရဲ.ဖော်ပြချက်အရတော. 90.2 Km ( ၅၆. ၃၇၅ မိုင် ) ဝေးပြီး Driving Time 1 hr 43 min လို.ဖော်ပြထားပါတယ် ။distance calculator ကိုသုံးပြီးဖော်ပြထားတဲ့ Site တစ်ခုမှာတော. 51 KM (kilometers) လို.ဖော်ပြထားပြီး Travel duration from Pathein to Wakema is around 1.03 Hours if your travel speed is 50 KM per Hour လို.ရေးသားထားပေမယ်. မြေပြင်အခြေအနေအရ Google ဖော်ပြချက်ကသာပိုနီးစပ်ပြီး ဒုတိယဖော်ပြချက်ကတော. မြေပုံ အဖြောင်.တိုင်း တိုင်းပြီး ယေဘူယျ တွက်ချက်ဖော်ပြထားပုံ ရပါတယ် ။
ဒီလမ်းလေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ.မဆိုးလှတဲ့ လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သလို လယ်ကွင်းစိမ်းတွေ ၊ နှစ်ရှည်သစ်ပင်တန်းအချို. နဲ. မလေးရှားပိတောက်ပင်တွေဟာလည်း လမ်းဘေးတစ်လျှောက်ရှိနေတာမို.စိတ်ကြည်နူးစရာ ရသတစ်ခုလည်းပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လတ်ဆတ်သောလေ အပြည်.အ၀ရတဲ့ လမ်းလေးတစ်ခုပါ ။
ထိုခရီးစဉ်ဓါတ်ပုံများ ကြည်.ရှု ရန်
မြို.လေးရဲ.တစ်ချိန်က ၀င်ရာ..ထွက်ရာ ..တစ်ခုတည်းသော...
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 5:20 PM No comments:
မကြာမှီ ပေါ်ထွန်းလာတော.မည်. စားပွဲတင် တင်းနစ် အားကစ...
ပညာ.အလင်း လူငယ်.ရေးရာ ညကျောင်း - ၀ါးခယ်မ